Bit By Bit - Running fanandramana - 4.3 roa lafiny ny andrana: laboratoara-saha sy ny Analog-Hafanàm-po
Lab fanandramana manolotra fanaraha-maso, saha fanandramana manolotra realism, ary nomerika saha fanandramana mitambatra fanaraha-maso sy ny realism amin'ny ambaratonga.
Fanandramana tonga amin'ny endriny maro samy hafa sy ny habe. Nefa, na dia eo aza ireo fahasamihafana, mpikaroka mahita fa manampy ny mandamina fanandramana miaraka ny fitohi- eo amin'ny laboratoara fanandramana sy ny saha fanandramana. Ankehitriny, na izany aza, dia tokony mpikaroka ihany koa ny mikarakara fanandramana miaraka ny fitohi- eo Analog dizitaly fanandramana sy ny fanandramana. Izany roa-toerana amin'ny lafiny famolavolana dia hanampy anao hahatakatra ny tanjany sy ny fahalemeny ny fomba isan-karazany sy ny soso-kevitra faritra ny fahafahana lehibe indrindra (Sary 4.1).
Sary 4.1: Schematic ny famolavolana toerana ho an'ny fanandramana. Taloha, fanandramana Niovaova nanaraka ny laboratoara-tsaha lafiny. Ankehitriny, izy ireo koa dia mitovy eo amin'ny lafiny Analog-dizitaly. Raha ny hevitro, ny faritra ny fahafahana lehibe indrindra dia dizitaly saha fanandramana.
Taloha, ny tena fomba nikarakara mpikaroka fanandramana dia nanaraka ny laboratoara-tsaha lafiny. Ny ankamaroan'ny andrana ao amin'ny siansa ara-tsosialy dia Lab fanandramana izay manao hafahafa undergraduate mpianatra asa ao amin'ny laboratoara ho an'ny bola mazava ho azy. Io karazana fikarohana andrana manjaka amin'ny psikolojia satria manampy mpikaroka mba hamorona tena manokana fitsaboana natao hitsapana tena manokana momba ny ara-tsosialy teoria fitondran-tena. Fa ny olana sasany, na izany aza, mahatsapa zavatra somary hafahafa momba ny fantsakan-mafy hevitra momba olombelona fitondran-tena toy izany ny olona tsy mahazatra manao toy izany asa tsy mahazatra eo amin'ny toerana tsy mahazatra toy izany. Ireo ahiahy no nitarika ny hetsika ho amin'ny saha fanandramana. Saha fanandramana mitambatra ny mahery randomized famolavolana ny andrana amin'ny fanaraha-maso bebe kokoa ny mpandray anjara solontenan'ny vondrona, fanaovana asa mahazatra kokoa, amin'ny toe-javatra voajanahary kokoa.
Na dia ny olona sasany mihevitra ny laboratoara sy ny an-tsaha toy ny mifaninana fomba fanandramana, dia tsara indrindra ny mieritreritra azy ireo ho toy mifameno amin'ny fomba isan-karazany tanjany sy ny fahalemeny. Ohatra, Correll, Benard, and Paik (2007) ampiasaina na ny laboratoara fanandramana sy saha fanandramana eo amin'ny ezaka mba hahita ny loharanom-baovao avy amin'ny "reny sazy." Any Etazonia, reny mahazo kely vola noho ny tsy nanan-janaka ny vehivavy, na dia mampitaha ny vehivavy amin'ny fahaiza-manao toy izany koa miasa ao amin'ny asa toy izany koa. Maro ny fanazavana azo atao noho izany toromarika, ary ny iray dia ny mpampiasa no mitanila hamely reny. (Mahaliana fa ny mifanohitra toa marina ny ray izy mirona mba hahazoana bebe kokoa mihoatra noho ny ampy ny olona tsy nanan-janaka). Mba hanombana mety fitongilanana manohitra ny reny, sy ny mpiara-miasa nihazakazaka Correll fanandramana roa: ny iray ao amin'ny laboratoara ary ny iray any an-tsaha.
Voalohany, ao amin'ny laboratoara sy ny mpiara-miasa fanandramana Correll nilaza mpandray anjara, izay oniversite undergraduates, fa ny Kalifornia-monina start-up fifandraisana orinasa no nitarika ny asa fikarohana ho an'ny olona iray mba hitarika ny vaovao East Coast sampan-draharaha ara-barotra. Mpianatra no nilaza fa ny orinasa te ny fanampiana amin'ny dingana ny fanaramàna ary izy ireo nangataka mba hamerina hijery nitohy ny maro mety kandidà sy ny fanasokajiana ny kandidà amin'ny lafiny maro toy ny faharanitan-tsaina, tsara fanahy, sy ny fanoloran-tena mba hiasa. Ankoatra izany, ireo mpianatra dia nanontany raha fahazoan-dalana izy ireo sy ny fandraisana mpiasa avokoa ny mpangataka izay fahazoan-dalana izy ireo toy ny manomboka karama. Tsy fantany fa ny mpianatra, na izany aza, ny nitohy ireo namboarina manokana mba ho toy izany koa afa-tsy zavatra iray: ny sasany amin'ireo nitohy nanamarika reny (alalan'ny fitanisana anjara amin'ny ray aman-dreny-mpampianatra fikambanana) ary ny sasany tsy nanao. Correll nahita fa ireo mpianatra dia tsy azo inoana ny fahazoan-dalana hidirana fandraisana mpiasa avokoa ny reny sy nanolotra azy manomboka karama ambany. Ankoatra izany, amin'ny alalan'ny antontan'isa fanadihadiana ny na ny naoty sy ny fanaramàna-mifandray amin'ny fanapahan-kevitra, Correll nahita fa ny reny 'fatiantoka dia tena nanazava ny zava-misy fa ny reny no laharana ambany eo amin'ny lafiny fahaizana sy ny fanoloran-tena. Amin'ny teny hafa, Correll nandresy lahatra fa ireo toetra ireo ny rafitra alalan 'izany ny reny sahirana. Noho izany, io fanandramana laboratoara sy ny mpiara-miasa aminy namela Correll mba handrefesana ny vokatra causal ary manome ny mety ho fanazavana ho an'ny izany vokany.
Mazava ho azy, ny iray mety ho resy lahatra momba ny nandinika lalina an'izany momba ny Etazonia iray manontolo tsenan'ny asa miorina amin'ny fanapahan-kevitra vitsivitsy undergraduates-jato izay mety tsy nanana fotoana feno asa, aoka ihany nanakarama olona. Noho izany, Correll sy mpiara-miasa ihany koa ny saha mifameno nitarika ny fanandramana. Ny mpikaroka namaly-jatony ny dokam-barotra asa misokatra amin'ny fandefasana amin'ny fonony taratasy sandoka sy nitohy. Mitovitovy amin'ny fitaovana naseho amin'ny undergraduates, nitohy ny sasany nanamarika-reny ary ny sasany tsy. Correll sy ny mpiara-miasa aminy ny reny dia hita fa tsy mety hatao hoe hiverina ho an'ny fanadihadiana noho ny tsy nanan-janaka mahafeno fepetra koa ny vehivavy. Amin'ny teny hafa, tena mpampiasa consequential manao fanapahan-kevitra ao amin'ny toerana voajanahary ny fitondran-tena toy ny undergraduates. Moa ve izy ireo ho toy izany koa ny fanapahan-kevitra ho an'ny antony iray ihany? Indrisy anefa, tsy fantatray. Ny mpikaroka tsy afaka mangataka ny mpampiasa ny fanasokajiana ny kandidà, na hanazava ny fanapahan-kevitra.
Io roa ny andrana hita betsaka momba ny laboratoara sy ny saha fanandramana amin'ny ankapobeny. Lab fanandramana manolotra tanteraka mpikaroka akaikin'ny fanaraha-maso ny tontolo iainana izay mpandray anjara no hanapa-kevitra. Noho izany, ohatra, ao amin'ny laboratoara andrana, Correll dia afaka mba hahazoana antoka fa nitohy rehetra dia namaky ny teny tao amin'ny toerana mangina; any an-tsaha andrana, ny sasany tamin'ny nitohy mihitsy aza mety tsy voavaky. Ankoatra izany, satria mpandray anjara ao amin'ny laboratoara fametrahana mahafantatra fa izy ireo dia nianatra, mpikaroka dia matetika afaka manangona tahirin-kevitra fanampiny izay afaka manampy azy ireo hahatakatra ny antony mpandray anjara no manao ny fanapahan-keviny. Ohatra, Correll nanontany mpandray anjara ao amin'ny laboratoara fanandramana ny fanasokajiana ny kandidà amin'ny lafiny samihafa. Izany karazana dingana tahirin-kevitra afaka manampy ny mpikaroka hahatakatra ny fomba fiasa ao ambadiky ny fahasamihafana eo amin'ny fomba itondrantsika ny nitohy mpandray anjara.
Etsy an-danin'izany, ireo toetra izay tena ihany aho vao lazaina ho tombony ihany koa indraindray heverina ho fatiantoka. Mpikaroka tia saha fanandramana milaza fa mpandray anjara amin'ny laboratoara fanandramana tena afaka manao zavatra amin'ny fomba hafa izy ireo rehefa akaiky ho hitan'ny. Ohatra, ao amin'ny laboratoara mpandray anjara andrana mety ho tsaina ny tanjona ny fikarohana sy ny nanova ny fitondran-tenany mba tsy hiseho mitanila. Ankoatra izany, mpikaroka tia saha fanandramana mety hilaza fa kely fahasamihafana amin'ny nitohy ihany miavaka amin'ny tena madio, mamokatra laboratoara tontolo iainana, ary dia toy izany ny laboratoara andrana dia ny-Tombanan'ny ny vokatry ny reny eo amin'ny fanapahan-kevitra tena fanaramàna. Farany, maro mpanohana ny mitsikera an-tsaha andrana laboratoara fanandramana fianteherana hafahafa mpandray anjara: indrindra ireo mpianatra avy amin'ny tandrefana, nandia fianarana dia, mandroso, Rich, ary firenena demokratika (Henrich, Heine, and Norenzayan 2010) . Ny fanandramana ny Correll sy mpiara-miasa (2007) ohatra roa tafahoatra eo amin'ny laboratoara-tsaha fitohi-. Ao anelanelan'ny roa amin'ireo tafahoatra dia misy isan-karazany ao anatin'izany ny fomba fijery mifangaro teti-dratsy toy ny mitondra tsy mpianatra ho laboratoara, na mandeha any an-tsaha, fa mbola manana mpandray anjara manao asa tsy mahazatra.
Ankoatra ny amin'ny laboratoara-tsaha lafiny izay efa nisy tany aloha, ny taona nomerika midika fa mpikaroka ankehitriny manana lafiny lehibe faharoa izay fanandramana miaraka dia afaka miovaova: Analog-dizitaly. Toy ny laboratoara misy madio fanandramana, madio saha fanandramana, ary isan-karazany ny grefy ao eo, misy madio Analog fanandramana, madio nomerika fanandramana, ary isan-karazany ny grefy. Tsy mamitaka ny hanolotra ofisialy famaritana lafiny io, fa ilaina miasa famaritana dia tanteraka dizitaly fanandramana ireo fanandramana izay mampiasa ny foto-drafitrasa niomerika handray mpandray anjara, randomize, hamonjy fitsaboana, ka refeso vokatra. Ohatra, Restivo sy van de Rijt ny (2012) fianarana ny barnstars sy Wikipedia dia tanteraka Hafanàm-po an fanandramana satria nampiasa nomerika rafitra rehetra dingana efatra ireo. Toy izany koa Analog tanteraka fanandramana ireo fanandramana izay tsy mampiasa ny nomerika foto-drafitr'asa na inona na inona ireo dingana efatra. Maro ny mahazatra andrana amin'ny psikolojia dia Analog fanandramana. Ao anelanelan'ny roa amin'ireo tafahoatra misy ampahany nomerika fanandramana izay mampiasa ny fitambaran'ny Analog sy nomerika rafitra ho amin'ny dingana efatra.
Manakiana, ny fahafahana mihazakazaka dizitaly dia tsy fanandramana fotsiny amin'ny aterineto. Ny mpikaroka dia afaka mihazakazaka ampahany nomerika fanandramana amin'ny alalan'ny fampiasana fitaovana nomerika ao amin'ny tontolo ara-batana, mba hanafaka fitsaboana na handrefy vokatra. Ohatra, afaka mampiasa ny mpikaroka mahay finday mba hanafaka fitsaboana na Sela Mpandray Hafanana ao amin'ny nanorina tontolo mba handrefy vokatra. Raha ny marina, araka ny ho hitantsika aoriana ato amin'ity toko ity, mpikaroka an-trano no efa nampiasa hery metatra mba handrefy vokatra amin'ny fanandramana momba ny ara-tsosialy sy ny angovo fenitra momba 8.5 tapitrisa ny tokantrano (Allcott 2015) . Rehefa lasa fitaovana nomerika tafiditra hatrany an ny fiainan'ny olona sy ny Sela Mpandray Hafanana lasa tafiditra tao an-nanorina tontolo iainana, ireo fahafahana hihazakazaka amin'ny ampahany nomerika fanandramana eo amin'ny ara-batana hitombo be izao tontolo izao. Amin'ny teny hafa, Hafanàm-po an fanandramana dia tsy fanandramana fotsiny aterineto.
Hafanàm-po an rafitra mamorona fahafaha vaovao ho an'ny fanandramana na aiza na aiza eny amin'ny laboratoara-tsaha fitohi-. Ao amin'ny laboratoara madio fanandramana, ohatra, mpikaroka afaka mampiasa dizitaly ho an'ny mpanao an-idina rafitra fandrefesana ny mpandray anjara 'fitondran-tena; Ohatra iray amin'izany karazana fanatsarana fandrefesana no maso-Tracking fitaovana izay marina sy manome fepetra ny mibanjina foana toerana. Ny vanim-potoana nomerika ihany koa ny mamorona ny mety ho mihazakazaka laboratoara-tahaka ny fanandramana amin'ny aterineto. , Ohatra, ny mpikaroka no nolaniana haingana Amazon Mechanical Turk (MTurk) handray mpandray anjara ho an'ny aterineto fanandramana (Sary 4.2). MTurk lalao "mpampiasa" izay asa izay tokony ho vita amin'ny "mpiasa" izay maniry ny hamita ireo asa-bola. Tsy toy ny asa nentim-paharazana tsena, na izany aza, ny anjara asa fotsiny matetika mila minitra vitsy mba hameno sy ny fifandraisana eo amin'ny mpampiasa iray manontolo sy ny mpiasa dia virtoaly. Satria MTurk Mpaka lafiny nentim-paharazana laboratoara andrana-fandoavana ny olona mba hamitana asa fa izy ireo dia tsy atao ho maimaim-poana-izany dia mazava ho mety amin'ny sasany karazana andrana. Ny tena, MTurk no namorona ny foto-drafitrasa ho an'ny fitantanana ny farihy ny mpandray anjara-fiantsoana ho miaramila sy ny fandoavana ny olona-ary mpikaroka efa naka nanararaotra izany foto-drafitrasa ny mikaroka amin'ny dobo misy foana ny mpandray anjara.
Sary 4.2: Papers navoaka fampiasana angona avy Amazon Mechanical Turk (MTurk) (Bohannon 2016) . MTurk sy ny asa an-tserasera tsena mpikaroka manolotra fomba iray mety handray mpandray anjara ho an'ny fanandramana.
Hafanàm-po an fanandramana mamorona kokoa alohan'ny fahafaha-tahaka ny fanandramana. Hafanàm-po an saha fanandramana dia afaka manolotra fanaraha-maso henjana sy ny dingana angona mba hahatakatra azo atao rafitra (toy ny laboratoara fanandramana) ary kokoa ireo mpandray anjara samihafa manao tena fanapahan-kevitra eo amin'ny tontolo iainana voajanahary (toy ny saha fanandramana). Ankoatra izany fitambaran'ny toetra tsara ny teo aloha andrana, Hafanàm-po an saha fanandramana telo ihany koa ny fahafahana manolotra izay sarotra amin'ny Analog laboratoara sy ny saha fanandramana.
Voalohany, kosa ny ankamaroan'ny Analog laboratoara sy ny saha fanandramana manana ny mpandray anjara an-jatony, Hafanàm-po an saha fanandramana afaka an-tapitrisany ny mpandray anjara. Io fiovana eo amin'ny ambaratonga dia satria ny sasany fanandramana dizitaly afaka mamokatra amin'ny aotra angon-drakitra miova vola. Izany hoe, indray mandeha mpikaroka no namorona ny andrana foto-drafitrasa, fampitomboana ny isan'ny mpandray anjara matetika tsy hampitombo ny vidiny. Mitombo ny isan'ny mpandray anjara amin'ny alalan'ny toe-javatra ny 100 na mihoatra dia tsy fotsiny hamaroan'isa fiovana, dia hatsaran'ny fiovana, satria manampy mpikaroka mba hianatra samihafa zavatra avy amin'ny fanandramana (ohatra, heterogeneity ny fitsaboana vokatry) ary nihazakazaka hafa tanteraka fanandramana teti-dratsy ( ohatra, maro be traikefa). Io hevitra io no zava-dehibe, aho hiverina ho azy mankany amin'ny faran'ny toko rehefa manolotra torohevitra momba ny famoronana dizitaly fanandramana.
Faharoa, kosa ny ankamaroan'ny Analog laboratoara sy ny saha fanandramana hitondra ny mpandray anjara toy ny indistinguishable gadget, Hafanàm-po an saha fanandramana matetika mampiasa fototra vaovao mikasika ny mpandray anjara ao amin'ny famolavolana sy ny fanadihadiana dingana ny fikarohana. Izany fototra vaovao, izay atao hoe mialoha ny fitsaboana vaovao, dia matetika no misy amin'ny dizitaly fanandramana satria mitranga eo amin'ny tontolo norefesiny tanteraka. , Ohatra, ny mpikaroka ao amin'ny Facebook manana kokoa mialoha fitsaboana vaovao noho ny mpikaroka nanaovany ny fitsipika fanandramana amin'ny undergraduates laboratoara. Io mialoha fitsaboana vaovao dia manome fahafahana mpikaroka mba hifindra mihoatra hitsaboana mpandray anjara toy ny indistinguishable gadget. More manokana, mialoha fitsaboana vaovao mahatonga mahomby kokoa fanandramana-teti-dratsy toy ny fanakanana (Higgins, Sävje, and Sekhon 2016) ary lasibatra fandraisana ny mpandray anjara (Eckles, Kizilcec, and Bakshy 2016) -ary kokoa nanampy fanadihadiana-toy ny tombany ny heterogeneity ny fitsaboana vokatry (Athey and Imbens 2016a) sy covariate fanitsiana ny fametrahana mazava tsara kokoa (Bloniarz et al. 2016) .
Fahatelo, maro kosa Analog laboratoara sy ny saha fanandramana hamonjy fitsaboana sy ny fepetra vokatra ao amin'ny somary Compressed fe-potoana, ny sasany saha Hafanàm-po an fanandramana tafiditra fitsaboana izay mety ho voavonjy rehefa mandeha ny fotoana sy ny vokatry Azo refesina ny fotoana. Ohatra, Restivo sy van de Rijt ny fanandramana manana ny vokany norefesiny isan'andro ny 90 andro, ary iray amin'ireo andrana aho hilaza aminao ny momba tatỳ aoriana ao amin'ny toko (Ferraro, Miranda, and Price 2011) mamantatra vokatra ny 3 taona amin'ny ankapobeny tsy misy vidiny. Ireo telo fahafahana-habeny, mialoha ny fitsaboana vaovao, ary ny fitsaboana sy ny vokatra longitudinal data-no tena fahita, rehefa fanandramana dia hihazakazaka amin'ny tampon'ny foana-on fandrefesana rafitra (jereo Chapter 2 bebe kokoa amin'ny foana-on fandrefesana rafitra).
Raha nomerika saha fanandramana manolotra mety maro, izy ireo koa dia mizara ny sasany amin'ny fahalemena na Analog laboratoara sy ny saha fanandramana. Ohatra, fanandramana tsy azo ampiasaina mba hianatra ny lasa, ary izy ireo ihany no Tombanan'ny ny vokatry ny fitsaboana izay mety ho fitaovana. Koa, na dia fanandramana dia Azo antoka fa ilaina ny hitarika politika, ny tena tari-dalana izy ireo dia afaka atolotra dia somary voafetra noho ny fahasarotana ny tontolo iainana toy ny fiankinan-doha, fanajana ny olana, sy ny equilibrium vokany (Banerjee and Duflo 2009; Deaton 2010) . Farany, Hafanàm-po an saha fanandramana mankalaza ny etika ahiahy noforonin'ny an fanandramana. Mpanohana ny an-tsaha andrana anjomara ny fahaizany unobtrusively ary tsapaka tsehatra any consequential fanapahan-kevitra atao amin'ny olona an-tapitrisany. Ireo endri-javatra sasany manolotra tombontsoa ara-tsiansa, fa afaka ihany koa ny manao an-pahamendrehana fanandramana sarotra (mieritreritra momba azy io toy ny mpikaroka mitondra ny olona toy ny "laboratoara voalavo" eo amin'ny sehatra goavana). Ankoatra izany, ankoatry ny mety hanimba ny mpandray anjara, Hafanàm-po an saha fanandramana, noho ny kongonina, dia afaka ihany koa ny hanangana olana momba ny fanelingelenana ny miasa ara-tsosialy rafitra (ohatra, ny ahiahy momba ny fanakorontanana Wikipedia ny valisoa rafitra raha Restivo sy Van der Rijt nanome be loatra barnstars) .